अस्पताल भर्ना हुनुअघि यस्तो रह्यो... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
अस्पताल भर्ना हुनुअघि यस्तो रह्यो प्रधानमन्त्रीको दिन
दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सोमबार साँझ टिचिङ अस्पताल महाराजगन्ज भर्ना हुन जाँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सोमबार साँझ टिचिङ अस्पताल महाराजगन्ज भर्ना भएका छन्। अस्पताल भर्ना हुनुअघि उनी दिनभरि नै अरू नियमित समयजस्तो व्यस्त रहे।
सोमबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक बसेको थियो। सवा ११ बजेसम्म चलेको उक्त बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए। बैठकले पन्ध्रौं योजनाको दस्तावेज पारित गरेको छ।
लगत्तै प्रधानमन्त्रीले भिडिओ सन्देश रेकर्ड गराए। उनले प्रत्यारोपण सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालीका मुर्छित सपनालाई बीचमै छोडेर आफू अलप नहुने बताएका छन्।
‘जसरी खेलको बीचमा राम्रो खेलाडीले मैदान छाड्दैन, त्यसैगरी हाम्रा भर्खरै जागृत हुँदै गरेका सपना बीचमा अलपत्र पारेर म अलप हुन्न,' उनले भने।
भिडिओ सन्देश रेकर्ड गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई भेटे। आधा घन्टाको भेटमा पुनले सफल उपचार निम्ति शुभकामना दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सेतोपाटीलाई बताए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उपचारको सफलताका लागि दिएको शुभकामनामा ट्विटरबाटै जवाफ दिए।
उनले सोमबार दिउँसो नै पार्टीका केही नेता र मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गर्न भ्याए। जसमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल थिए।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे।
सोमबारै ओलीलाई भारतीय कार्यवाहक राजदूत अजयकुमारले पनि भेटेका थिए। उनले भारत सरकारका तर्फबाट ओलीको सफल उपचारको कामना गरे। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उनको टेलिफोन कुराकानी भयो।
आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दिन यस्तै भेटघाट र छलफलमै बितेको थियो। उनले आफ्नै निजी निवासमा सचिवालय बैठक बोलाएका थिए। त्यसपछि राति अबेरसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा व्यस्त रहे।
सोमबार दिउँसो ३ बजे अस्पताल जाने भने पनि राजनीतिक र पारिवारिक भेटघाटले ६ बजे मात्र पुगेको प्रेस सल्लाहकार थापाले जानकारी दिए।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि टिचिङ अस्पताल पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रसन्न मुद्रामा देखिन्थे। शुभचिन्तक र पत्रकारहरूलाई उनले हात हल्लाएर अभिवादन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा टोली भने बिहान ९ बजे नै अस्पताल पुगेको थियो। मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने ‘एन-एक्स-टु’ वार्डबाहिर सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ छन्।
ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण बुधबार हुँदैछ। त्यसअघि मुटु, रगत र पिसाब परीक्षण भइरहेको मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्रध्यापक डा. प्रेम ज्ञवालीले बताए।
उनका अनुसार, केही रिपोर्ट आइसकेका छन्, केही आउन बाँकी छन्। आइसकेका रिपोर्ट सामान्य छन्। मंगलबार उनको मिर्गौलाको डायलासिस पनि हुँदैछ।
ओलीको पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण १२ वर्षअघि भएको थियो। यसपालि उनले ३२ वर्षीया भाञ्जीबाट मिर्गौला लिन लागेका हुन्। मिर्गौला लिने र दिने दुवैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको डा. ज्ञवालीले बताए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १९, २०७६, १२:०८:००